समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश ! | Kendrabindu Nepal Online News
समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश !
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १३:५१
काठमाडौँ, २८ पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको तयारी थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले अवकाशको तयारी थालेको हो ।
samanya prashasan mantralay
Prevयस्तो बन्दैछ कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्ड, ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न
शीतलहरबाट जोगाउन बाढीपीडितलाई अस्थायी टहराNext
सरकारले भेटाएन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी, ५५ जना पुरस्कृत (नामावलीसहित)